General Izimo of Use - Rikoooo
General Izimo of Use of Rikoooo.com
Kugcine ukushintshwa on the 16 / 01 / 2017
Lezi Imigomo yokusetshenziswa ukuchaza izimo ngaphansi kwayo Iwebhusayithi Rikoooo.com inikeza ukufinyeleleka kuzinsizo zawo. By kokubhalisa ne Rikoooo.com, uqinisekisa ukwamukela zonke stipulations yalezi General Izimo of Use. Uma ungavumelani le Migomo Nemibandela, ungase ukusebenzi amasevisi ethu.
Le sevisi azisa noma nini ifayela entsha iyatholakala for thwebula futhi ukwaziswa okubalulekile. Ikheli lakho le ayihambi kunoma iyiphi inkampani yangaphandle futhi lihlala kuyimfihlo. Ungakwazi ngasiphi isikhathi ukushintsha bese ukukhansela okubhalisele kusuka wakho ilungu endaweni noma ezansi imeyili ngamunye wathola.
Ukusebenzisa Amalungu Your Indawo
Ukuze ufinyelele ilungu endaweni yakho, une isihlonzi kanye nephasiwedi enqunywe wena uma waqale wangena kuso. Esimweni nokulahlekelwa kulezi lomsebenzisi nephasiwedi, ungakwazi ngokushesha ukuthola kwabo esakhiweni Rikoooo.com ngokuchofoza ilinki okuyinto zone of ukuhlonza:
Uyobe wathumela i-imeyili equkethe iphasiwedi yakho.
Ngokuhambisana nomthetho "Informatique et Liberte" of 6 January 1978, unelungelo yokufinyelela, ulungise, walungise ngokwezinga futhi ususe idatha ngani.
Ukuze leli lungelo izixazululo ezintathu ayatholakala kuwe.
- Ngena ku sakho "Indawo Member"Futhi wenze noma yiziphi izinguquko online.
- Xhumana omphathi wewebhusayithi ye
- Thumela incwadi Kunconywa Rikoooo.com 107 chemin Gaillard du port 31410 UNoé - France
Rikoooo.com uthembisa ukusebenzisa nakanjani ezidingekayo ukuqinisekisa the best ukuhlinzekwa okungenzeka amasevisi ezikulo umsebenzisi Inthanethi. It asikwazi aphethwe nesibopho uma kwenzeka force majeure noma de empeleni waba ezingaphezu kwamandla ayo, ikakhulukazi uma kwenzeka kokuphazamiseka isevisi ezibangelwa ukuhluleka sezingcingo noma ukufinyelela internet umhlinzeki umsebenzisi Internet noma An update yezingxenye isayithi noma iseva web.
Rikoooo.com akuyena obangela ukusetshenziswa ezingase zenziwe ngumsebenzisi of ulwazi kanye nezinsiza ezikhona kwi site.